Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Aviation » Mmadụ 4 nwụrụ n'ihe mberede ụgbọelu Connecticut
Airlines • Aviation • Na-agbasa News Travel • News • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Mmadụ anọ nọ n'ụgbọ elu ahụ, nke a kọrọ na ọ bụ ụgbọelu azụmahịa Cessna Citation, dị ka ozi sitere na Federal Aviation Administration (FAA).
Ụgbọ elu dara n'ime ụlọ mmepụta ihe na Connecticut.
Ndị mmadụ niile nọ n'ụgbọ azụmaahịa Cessna Citation nwụrụ n'ihe mberede.
Ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ mpaghara na -agbuso ọkụ nke ihe mberede ahụ malitere.
Ndị ọrụ nnapụta na Farmington, Connecticut na -alụ ọgụ n'ọkụ na mpaghara ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke malitere mgbe ụgbọ elu azụmahịa Cessna Citation dara n'ime ụlọ n'ụtụtụ Tọzdee, o doro anya na ọ gburu mmadụ anọ nọ n'ụgbọ ahụ.
Ngalaba ndị uwe ojii Farmington gosipụtara na ụgbọ elu dara n'ime ụlọ dị n'okporo ụzọ Hyde, wee kwuo na tweet na ọrụ mberede nọ n'ala na -arụ ọrụ "ịpụpụ mpaghara dị nso".
Mmadụ anọ nọ n'ụgbọ elu ahụ, nke a kọrọ na ọ bụ ụgbọ elu azụmahịa Cessna Citation, dị ka ozi si na ụgbọ elu ahụ Nchịkwa Federal Aviation (FAA). Ọ dịghị onye n'ime mmadụ anọ a na -eche na ọ lanarịrị.
Mmadụ anọ nọ n'ụgbọ elu ahụ, nke a kọrọ na ọ bụ ụgbọelu azụmahịa Cessna Citation, dị ka ozi sitere na Federal Aviation Administration (FAA). Ọ dịghị onye n'ime mmadụ anọ a na -eche na ọ lanarịrị.
Dị ka ndị uwe ojii Farmington si kwuo, enweghị mmerụ ahụ a kọrọ n'ime ụlọ ahụ, nke onye nrụpụta ngwá ọrụ German Trumpf nwere.
N'ihe onyonyo ekesara site na ihe nkiri a na soshal midia, enwere ike ịhụ anwụrụ ọkụ na -enwu site na ebe ihe mberede mere, ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ na -agbachitere oke ọkụ nke si n'otu akụkụ ụlọ ahụ pụta.
Farmington dị na Connecticut's Hartford County, ihe dịka kilomita iri (10km) site n'isi obodo steeti ahụ.